Waa kuwee godadka samaynta Amen Corner at Augusta National?
Maxay 'Amen Corner'? Waa kuwee godadka lagu daro?
Raadinta caanaha caanka ah ee godadka ku yaal Augusta National Golf Club
"Amen Corner" waa naaneyska la siiyay 11th, 12th iyo 13th of holes ee Augusta National Golf Club , guriga Masters Tournament . Goobahaas ayaa ka dhigaya istiraatijiyad muhiim ah oo ah 9-ka dambe ee golaha golf, meelo ay ka dhacaan waxyaabo xiiso leh oo dhaca inta badan saameynta ku leh natiijada tartanka.
Waxaan ka gudbi doonaa saddexda godood ee hoos ku xusan, laakiin ugu horeyn aan sameyno kormeerka iyo su'aasha kale:
Macnaha Gaarka ah ee Amen Corner wuxuu si ballaaran u ballaariyey waqtiga
Marka "Amen Corner" markii ugu horreysay magaceeda la helay (dhammaadkii 1950-yadii), waxay lahayd macne gaar ah oo ka badan isticmaalka guud ee maanta.
Amen Corner asal ahaan waxa loo soo gudbiyay tallaalka wajiga 11aad ee cagaaran , gebi ahaanba godka 12-aad, iyo tallaalka dameerka 13-ta god.
Maanta, nambarka "Amen Corner" waxaa guud ahaan lagu dabaqaa godadka buuxa ee 11, 12 iyo 13 ee Augusta National. Laakiin haddii aad rabto inaad muujisid aqoontaada golf (khatarta inaad u muuqanayso pedantic), waxaad tusi kartaa macnaha asalka ah ee ereyga marka xigtaada saaxiibadaada golf-koodka ah.
Yaa la yimid 'Amen Corner,' iyo goorma?
Horyaalka Isboortiga Legendary iyo Isgaadhsiinta Herbert Warren Wind ayaa isticmaalay isticmaalka golf "Amen Corner" oo ku jira maqaalkiisa ciyaaraha sawirada ee 1958 Masters . Arnold Palmer wuxuu ku guuleystay koobkiisii ​​ugu horeeyay ee Green Jacket sanadkaa, Amen Corner wuxuu ahaa furaha ugu muhiimsan ee Palmer guusha.
Oo sidee baa dabayshu u soo gaadhay ereygan? Ma uusan ka soo horjeedin hawada khafiif ah. Dabayl ka dib wuxuu sharxay in gabaygii hore ee jazz loo waxyooday ereyga. Laakiin taariikhda Aamen Corner dib ayuu ugu soo noqdaa intaas ka sii fog .
Goobaha Qaadista Amen Corner
Halkan waxaa ku yaalo wax yar oo ku saabsan saddexda godood ee ka kooban Amen Corner at Augusta National Golf Club:
Magaca: White Dogwood
Dareemkan wuxuu ku bilaabmaa irbada qulqulaya, kadibna wuxuu u baahan yahay in uu noqdo meel cagaaran oo cidhiidhi ah, oo leh balli bidix iyo barkad weyn oo dhinaca midigta ah.
(Boondheer waxaa lagu daraa 1950, sanado ka hor in Rae's Creek u gudubtay dhinaca hore ee cagaaran.)
Taariikh ahaan, No. 11 waa godka ugu adag ee ku yaala Augusta Qaranka: Taariikhda tartanka, dhibcaha celceliska celceliska celceliska ee ku yaala afartan afartan waa 4.35.
Magac: Golden Bell
Waa godka ugu gaaban 3aad ee Augusta, laakiin Lambarka 12 ayaa sidoo kale ah midka ugu khatarta badan. Waxay u baahan tahay in laga toogto Ree's Creek , iyadoo kubbooyin kasta oo soo socda uu gaabanayo bangiyada la xiiray. Dheer ma fiicna, midkale (marka laga reebo in kubadu qallaji doonto), cagaarna waa mid aad u qulqulaya.
Bridge Hogan ayaa ku yaal godkaan; goleyaalku waxay gooyaan si ay u gaaraan cagaarka. Wakhtigan oo dhan, daloolkiisa ayaa ku jira 13th dhibcood celcelis ahaan inta lagu jiro Masters ee 3.094.
Deegaanka 13aad waxa uu ku yaalaa Nelson Bridge meel u dhaw dhulka hoostiisa. Dareemo bidix, darawali wanaagsan ayaa ka dhigaya inta ugu badan ee faa'iido u leh in ay tagaan cagaarka daroogada labaad. Hase-yeeshe, xuduudda Rae's Creek waxay ka gudubtaa dhinaca hore ee cagaaran, sidaa daraadeed kubbadaha gaaban ayaa soo kicin kara sariirta qulqulka.
Dhammaan xilliyada caadiga ah, daloolka 13-aad waa Lambarka 15-aad ee celceliska Masters ee ka hooseeya 4.838.
Sidaa daraadeed saddex meelood oo ka mid ah Amen Corner waxay ku bilaabmaysaa daloolka taariikhiga ah ee ugu adag ee koorsada; oo ay ku xigto Augusta National-ka ugu gaaban oo caadi ahaan si sahlan u ciyaara laakiin waxay keeni kartaa tiro badan; ka dibna dal kale oo sahlan oo sahlan oo soo saara shimbiro badan iyo gorgor .
Amen Corner at Augusta National Golf Club waxay soo saartaa fursado badan oo abaalmarin ah oo abaalmarin ah, sidaas darteedna farxad badan.
Xirfadlayaalkee ayay u adeegeen inay noqdaan kuwa ugu sareeya ee Masters?
The 6 Guuleystayaasha ugu Qosol badan ee Masters Tournament
'Root Open' ee Golf
Runta Cup: USA iyo Europe
Sida loo ciyaaro 1-2-3 tartanka ugu fiican
Maxay Tilmaamaha Ciyaarta ee PGA Champions League?
Yaa Ameerikaanka Ugu Horeeyay ee Badbaadinta Ingiriisku?
LPGA Tour Hogaamiyaasha Maaliyadeed
Horyaalka Dhallinyarada ee ugu weyn
Xidhitaanka goor dambe
Waxa la qabanayo wiig dheer
Waqtiga Mughal ee Hindiya
Waxyaabaha aan tooska ahayn ee loo isticmaalo isticmaalka badan ee Isbaanish
Guriga Talada Hiddaha
Afartan nin oo Afrikaan ah oo lab ah ayaa qora si ay u xasuusiyaan
Polymeriyada Biological: Proteins, Carbohydrates, Lipids
Toban Kun oo O'Jays Hits
Farqiga udhexeeya 'Nontheist' iyo Atheist
Ereyada ugu quruxda badan ee Afka Ingriiska ah
Dhacdooyinka Muhiimka ah ee Taariikhda Luqadda Ingiriisiga
Sida loo Aqoonsado oo loo Isticmaalo Qodobada Ingiriisida naxwaha
Sida Loo Qoro Warqad Racfaan loogu talagalay Kaararka Kulliyadda
Lambarka Sooshal Sekuuriti
Miyay Sumeeyayaashu Suubiyaan Killer?
Sidee loo Baranayaa Dibloomada Dibloomada ee GED / Dugsiga Sare ee Guriga
Noocyada Xulashada Dabiiciga ah
Biography ee Sonni Ali
Codsiga Guudmarka ah ee Doorashada 6: Khasaaridda Wakhtiga
Kayak Vs. Roodhi: Boatkee ayaa ku habboon?
Dagaalkii Dunida II: North American P-51 Mustang
Ka baxsan Afrika
Toddobaadka Faransiiska Qaranka
Argagixisada Xeerka DREAM